दशैं : अहंकाररूपी दानवको नाश गर्ने समय « Janata Samachar
बलिपूजाको वास्तविक अर्थ अहंकारलाई नाश गर्नु हो । अहंकार मार्नु नै यथार्थमा बलिपूजा हो । हाम्रो अहंकार महिषासुर दानव हो । देवी भगवती भन्नु हाम्रै विवेकवती बुद्धि हो । दुर्गा भनेको दुर्गतीलाई नाश गर्नु हो ।
दुर्गतीको अर्थ टाढा पुग्नु भनेको हो । आफै आनन्दस्वरुप आत्मा भएर पनि आनन्द प्राप्त गर्न संसारमा भौतारिन्छौं । टाढा–टाढा पुग्छौं । दुुर्गा भवानीको सात्विक पूजापूर्वक उहाँलाई प्रशन्न तुल्याएँ भन्ने मानसिकता पैदा गर्न सकियाे भने हामी खुशी हुन्छाैं र आनन्त प्राप्त गर्न सक्छाैं, जस्ताे कि गुरूले सिकाए अनुसार चेलाले कर्तव्य पुरा गर्दा गुरू खुशी हुन्छन् । देवी भवानी खुशी भएर हामीलाई उहाँको अनुग्रह (आशिर्वाद) प्राप्त छ भन्ने विश्वास भएपछि मन प्रसन्न हुन्छ र हाम्रो विवेक र बुद्धीको उदय हुन्छ । हामीलाई सद्ज्ञान प्राप्त हुन्छ र हाम्रो अहंकाररुपी महिषासुर दानवको नाश हुन्छ ।हाम्रा आगतका दिन सहज, सरल र सफल हुँदै जान्छ ।
नेपालीहरूले मान्दै आएका धेरै चाडपर्वहरु छन्, सबै चाडपर्वकाे आफ्नै विशेषता र महत्व छ । यी चाडपर्वहरु मध्ये पनि “दशैं र तिहार” अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएकाे छ । दशैंमा नवदुर्गा भवानीको पूजा विधिपूर्वक गरेर घटस्थापनादेखि शुभारम्भ गरी दशमीका दिन बिहान पूजा बिसर्जन गरी मान्यजनहरुको हातबाट टीका तथा प्रसाद ग्रहण गर्ने परम्परा छ ।
त्यसैगरी तिहारमा पनि यम पञ्चकको पूजाको विधान छ । काग तिहार, कुकुर तिहार, गाईतिहार, गोरु तिहार र भाइ तिहार (पाँच दिन तिहार) मनाइन्छ । यी सबै तिहारहरुमा यमराजको पूजा अनिवार्य छ । यम पूजाबाट यमराज खुशी हुन्छन् । यदि आफूले गरेको पाप कर्मले गर्दा यमलोकमा जानुपरेकाे छ भने त्यस बेलामा यमराजले आफ्नो पूजा गर्ने भक्तहरुलाई कम सजायँ दिन्छन् वा सजाय माफ गर्न पनि सक्छन् भन्ने धर्मशास्त्रको मान्यता छ। त्यसैले पनि यमपञ्चकमा यमराजकाे पूजा गर्ने हाम्राे संस्कार रहेकाे छ ।
यसरी देवी–देवताहरुको पूजा प्रसाद ग्रहण गर्नुबाट हामीलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ । आनन्द भनेको वास्तवमा ब्रम्हानन्द हो । ब्रम्ह भनेको सच्चिदानन्द हो । सत् भनेको सधैँ रहिरहने, चित भनेको स्वयं अनुभव हने र आनन्द भनेको कहिल्यै पनि नहराउने सुख हो । वास्तवमा प्रसाद ग्रहण गर्नु भनेको पनि त्यही आनन्दको अनुभव गर्नु हो । हाम्रा विभिन्न चाड पर्वले हामीलाई आनन्दको अनुभुति सिकाउँछ ।
दशैं तिहारमा परिवारबाट टढा भएका र काम विशेषले देशविदेश गएका सदस्यहरु पनि जम्मा हुन्छन् । आफ्ना मान्छेसँगको भेटबाट चित्त शान्त हुन्छ, चित्त शान्त हुनु भनेको आनन्दको अनुभुति हुनु हो । आनन्द भनेको के हो ? र, त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ त ? आनन्द भनेको हामी आफ्नै असली स्वरुप आत्मा हो, आत्मा हाम्रै मनको भित्र रहेको हुन्छ । मन शान्त (अचल) भएपछि आत्माको छाँया शाान्त मन या चित्तमा पर्दछ । शान्त मन आत्मातर्फ (भित्र) फर्केकाले र त्यो भित्र रहेको आत्मा आफ्नै शान्त चित्तमा प्रतिविम्वित भएकाले हामीलाई आनन्द प्राप्त भएको हो । जस्तो हाम्रो हातमा रहेको ऐनालाई आफ्नो मूखतर्फ फर्काउने हो भने त्यो ऐनामा आफ्नो मुख प्रष्ट देखिन्छ । सफा र शान्त ऐनामा आफ्नो मुख देखिए झैँ शान्त चित्तरुपी ऐनामा आफ्नो आत्माको अनुभव भएर हामीलाई जुनसुकै बेला पनि आनन्द प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण यो दशैं तिहारमा पूजा र प्रसाद ग्रहण गर्नु र मान्यजनबाट आशिर्वाद प्राप्त गर्नुकाे तात्पर्य पनि आनन्द कै अनुभव गर्ने एउटा ठूलाे माध्यम हो ।
कसैले राम्रा–राम्रा लुगाहरु लगाएर आनन्दको अनुभव गर्छन् । कसैले राम्रा गहना लगाएर त कसैले मिठा खानेकुरा खाएर आनन्द प्राप्त गर्दछन् । कसैले मन परेकाे खेल खेलेर पनि आनन्द प्राप्त गर्दछन् । यी सबै अवस्थाहरुमा शान्त चित्तमा आत्मा कै अनुभव हुन्छ र आनन्द हुन्छ । आनन्द भनेको हामीबाट भिन्न वस्तु हुँदै होईन, आफ्नै असलीस्वरुप आत्मा हो ।आत्मा चिन्न सक्नुपर्छ, पहिला आफू के हाे र के प्राप्तीका लागि कर्म गर्दैछु भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
आनन्दस्वरुप आत्माको अनुभव गर्ने माध्यम शान्त चित्त हो । गलत संस्कार र कुप्रथाहरूकाे अन्त्य गर्दै, समयानुकुल संस्कारकाे थिति मिलाउँदै पुर्खाकाे नासाेकाे रूपमा रहेकाे चाडपर्व मनाउँनुपर्छ । आनन्द र खुशी प्राप्त गर्नुपर्छ । खुशीले नै समग्रमा दशैं नेपालीहरुको आनन्द र खुशीको चाड हो । सबैमा दशैंको शुभकामना ।